Manjakazaka ny mpanararaotra… | NewsMada
Ny fahendren-drazantsika milaza fa ny soa fianatra, ny tsara fanao, ny mendrika fakan-tahaka. Saingy tato ho ato, adaladala toa zokim-bomanga ireo mpitondrantsika sasantsasany, ka ny lehibe indray no milatsaka am-patana. Mahamenatra ny zava-miseho, fahorian’ny hafa, ifalian’ny sasany, isehosehoana sy isekosekoana amin’ny fahitalavitra. Nahavelon-taraina ireo fianakaviana sasany nidonam-pahoriana, ny fahenoana minisitra sasany, nibaiko mpanao gazetin’ny haino aman-jerim-panjakana, araka ny filazan’ny fianakaviana tamin’ny mpanao gazety, ny amin’ny tokony hahitana ny sariny… Anisan’ny niharan’izany ireo nidonam-pahoriana tany Anjozorobe. Zorony be ho azy ireo tokoa angaha ny fisehoana amin’ny fahoriana tahaka ireny ? Tsy izany ve ilay manararao-paty…
Impiry impiry no miseho ny tahaka izany, manjaka hatrany ireo mpanararaotra. Atahorana ny fisian’ny haintany mety hiteraka mosarena tao ho ao, efa mihetsiketsika tahaka ny sofim-bitro ary mikofokofoka toy ny ondry terak’alina ireo mpandraharaha mpanararaotra manangom-bary. Mametraka ny pai-panorony rehetra any amin’ireo tantsaha any ambany ravinkazo any. Tsy ny olona sahirana aloha no hahavita ny zavatra toa izany fa ireo bevozona sy behatoka vonona hitsentsitra ny madinika. Volon-katsaka misakan-tadio ny vahoaka mitrongy vao homana, manoloana ny adim-piainana, ka mizaka ny tsy eran’ny aina…
Ny mahavariana sy mahavalalanina, mitombo andro aman’alina ireo mpanararaotra, indrindra ireo mpanararao-pahefana. Anisan’ny tena ahitana izany, eo amin’ny resaka fanondranana, fifamoivoizana, fandriampahalemana, eny hatramin’ny raharaha eny anivon’ny fitsarana koa aza… Mampiteny ny moana ny zava-mitranga sy hita miseholany. Ratsy tarehy mangata-bady ny hafitsoky ny sasany, ka ny anaran-dray no enti-mangataka sy iafenana matetika. Manjaka ny fahalovana, tsy mitoetra ny fahamarinana, mizotra mankany amin’ny fahavarinana ny firenena. Nankaiza ny manam-panahy fa ny manan-tsaina ity toa mamarina an-kady? Sa ny fahendrena hanaraka ny adalan’ny hafa…
Mbola ho faty entin’alina eto ihany ny fiainam-pirenena raha mbola mahazo vahana ireo mpanararaotra. Akondro ambanan’antsy, ohatra, ny fiakaran’ny saran-dalana, nihatra tokoa rehefa ela ny ela. Manampy trotraka ny fiakaran’ny vidin-tsolika tsy ahitan’ny fanjakana vahaolana. Voa telo ohatran’ny voaloboka ny valalatsimandadiharona ka sady voa no lo no boka. Andaniny, ireo mpitondra milaza fa mandeha soa aman-tsara ny raharaham-pirenena sy ny fampandrosoana. Ny vahoaka kosa, etsy ankilany, tsy afa-mikofoka intsony. Lanaky ny delestazy sy ny fidangan’ny vidim-piainana ary ny fanararaotana isan-karazany… Raha mitohy izao, ahina ny fipoahana ara-tsosialy satria miraviravy tanana ireo mpitondra manoloana ny fahoriam-bahoaka…